İzmir Subway F. Altay-Narlıdere Qandaraaslaha Dhismaha Maamul-hoosaadka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirDhisidda dhismaha Metropolitan F. Altay-Narlıdere
26 / 10 / 2017 35 Izmir, Xaraashyada, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Metro, Meelaha Kumbuyuutarada, TURKEY, CONSTRUCTION Tenders
Martiqaadkan heshiiska wuxuu raacayaa Ogeysiiska Qandaraaska Guud ee mashruucan lagu daabacay Xayasiinta Qandaraaska December 21.
Shirkadda Isgaadhsiinta ee Izmir (Loo-shaqeeyaha) waxay dalbatay amaah ay ka heshay Baanka Yurub ee dib-u-dhiska iyo Horumarinta (Baanka) ee Mashruuca Metro II Project Izmir.
Waqtigan xaadirka ah, loo-shaqeeyuhu wuxuu ka codsanayaa qandaraaslayaasha ku xiran qandaraasyada soo socda, oo laga maalgelin doono qayb ka mid ah dakhliga amaahda:
• Nidaamka Tareenka fudud ee İzmir 4. Wajiga F. Altay-Narlıdere ee dhismaha Degmada.
Muddada shaqada waa bilaha 42.
Si loo helo qandaraaska, hindise-bixiyeyaashu waa inay buuxiyaan shuruudaha hoos ku qoran.
1. Xaalada Maaliyadeed
Qofka dalbanaya wuxuu yeelanayaa sanadle ah sanadkiiba oo aan ka yarayn 5 € sanad walba shanta sano ee ugu dambeysa (120,000,000.00). Qiimaha wareegga ah ee lacagta la qeexay waa in lagu xisaabiyaa qiimaha sicirka ee dhexe ee sanad kasta oo la soo sheego sida ay go'aamisay Bangiga Dhexe ee Jamhuuriyadda Turkiga.
Hantidhawrka waxaa looga baahan yahay inuu soo gudbiyo warqad tixraac ah oo bangiga ah oo muujinaysa deyn aan la isticmaalin ama deyn ama aan lahayn lacag xadidan oo aan lahayn wax xaddidan bangiyada, kuwaas oo ku filan inay bixiyaan nashaadka dhismaha ee heshiiskii muddada 20,000,000.00 (afar) bil gudaheed, oo aan ka yarayn 4 qiimo u dhiganta. Waraaqda tixraaca ee Bankiga waa in la soo saaraa taariikhda martiqaadka qandaraaska. Qodobbada kor ku xusan waxaa sidoo kale lagu dabooli karaa lacag ururinta amaahda amaahda ama bixinta wax ka badan hal warqad tixraac ah.
Hantidhowgu waa inuu sidoo kale muujiyaa in celcelis ahaan, uu ku guulaystay bartilmaameedyada la sheegay ee hoos ku xusan shanta sano ee ugu dambaysa (5).
Heerka Xorta ah: Hantida xilligan / deymaha muddada gaaban = 1.00 ugu yar
Deynta dakhliga sinnaanta: deynta wadarta / isku dheelitirka guud = ugu badnaan 2.5
Dalabku wuxuu sidoo kale muujinayaa in aysan jirin mid ka mid ah xaaladaha soo socda:
caymis ama daadin
hantida waxaa maamula dejiyaha ama maxkamad
dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ayaa la joojinayaa ama xaalad la mid ah sharciyada iyo xeerarka qaranka.
- Waayo-aragnimada qandaraaslaha ama qandaraaslaha maamulka ee heshiisyada, oo shaqeynaya shanta sano ee ugu dambeysa (5), ugu yaraan sagaal (9) bilood bil kasta.
Qandaraaslaha wuxuu ku guulaystay inuu noqdo qandaraasle ugu weynaa fulinta ugu yaraan laba (170,000,000.00) heshiisyada tobankii sano ee ugu dambeeyay (10) oo la mid ah (dhismaha mitrooga, nidaamka tareenka, tas-hiilaadka gaadiidka ee Funikiler), iyadoo qiimaha ay ka yaryihiin 2 €. waa in ay muujiyaan.
Hantidhawrku waa inuu muujiyaa in uu leeyahay tareenka ugu hooseeya 10 ee tobanka sanno ee ugu dambeeyay (4).
3 Khibrad Shaqsiyadeed
- Dalbane wuxuu siin doonaa shaqaale leh karti ku habboon si uu u buuxiyo jagooyinka ku qoran gundhigga codsiga warbixinta.
4. Xaqiijinta suurtagalka
- Qofka hindise-bixiyuhu waa inuu haystaa qalabka lagu qeexay Dokumentiga Gundhigga ama uu caddeeyo inuu leeyahay (helitaan kiro ama waqti dheer ah, heshiis iibsi, ama habab kale).
Hantidhowrka qandaraasyada lagu maalgelinayo daynta amaahda Baanka waxay u furan tahay shirkado ka kala socda dalalka oo idil. Haddii dakhliga Baanka Bankiga, lacag bixintaas ama hawlaha soo dejinta waxaa mamnuuc ka ah Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay go'aanka lagu gaadhay sida ku xusan Cutubka 7aad ee Qodobka Heshiiska Qaramada Midoobey, wixii lacag ah ee loogu talagalay shakhsiyaadka ama hay'adaha waa in aan loo adeegsan waxqabad kasta oo soo dejinta ah.
Dukumeentiyada dalabyada waxaa lagu heli karaa iyadoo la bixinayo lacagta aan la soo celin karin ee 2,000.00 TL ama u dhiganta lacagta lagu bedeli karo cinwaanka hoose. Lacag bixinta waa in la sameeyaa mid ka mid ah xisaabaadka hoos ku qoran iyo "F.Altay - Dukumeentiga Qandaraaska ee Nireddere waa in lagu qoro qaybta sharaxaadda.
Hantidhowrka: Degmada Caasimada Magaalada İzmir
Magaca Baanka: VAKIFBANK
Laanta Bangiga: IZMIR BRANCH
IBAN ee Xisaabta Lira ee Turkiga: TR640001500158007292289040
IBAN for Account Dool: TR740001500158048000939721
IBAN loogu talagalay Euro-ga: TR520001500158048000939729
Marka la codsado, dukumeentiyada waxaa loo dirayaa isla markiiba kambiyuutarka; Si kastaba ha ahaatee, wax masuuliyad ah looma aqbali karo khasaarahoodii ama geeridii dambe.
Qaab-hawleedka laba-marxaladood waa in la ansaxiyaa waana in uu sii wataa sidan soo socota:
(a) dalabka marxaladda koowaad, iyadoon la tixraacin qiimaha sicirka, wax kasta oo ka yimaada xaaladaha farsamo iyo ganacsi ee lagu dhigay dokumentiyada qandaraaska, ama wixii farsamo oo kale wuxuu ka kooban yahay liis. Ka dib qiimeynta marxaladda Heerka Koowaad ee loo-shaqeeyaha, Loo-shaqeeyuhu wuxuu ku martiqaadi doonaa hindise-bixiyeha kasta inuu buuxiyo shuruudaha u-qalmitaanka iyo soo gudbinta soo-jeedin farsamo u hoggaansamaysa kulan sharaxeed. Soo jeedinta mid kasta oo ka mid ah dalabyadaas waa in dib loo eegaa kulanka iyo dhammaan isbeddellada lagama maarmaanka ah, darajooyinka, kalagoynta iyo isbeddelada kale waa in la tixgeliyaa oo lagu diiwaan geliyaa Diiwaanka. Kaliya kuwa hindise-bixiyeyaasha u qalma ee u soo gudbiya qandaraaska koowaad ee farsamada ee la aqbali karo oo la aqbali karo ayaa lagu martiqaadi doonaa inay soo gudbiyaan qandaraaska Heerka Labaad.
(b) Hindisaha Tier II waxa uu ka kooban yahay teknoolajiyad casri ah iyo dalab ganacsi, oo soo koobaya dhammaan isbeddellada ay codsadeen Loo-shaqeeyaha, sida looga baahan yahay in ay ka tarjumaan wixii isbeddel ah ee hindisada hindisada lagu soo saarey Heshiiska Meel-marinta ama ka dib marka la soo gudbiyo soo jeedinta Tier II.
Codsiyada Heerka Koowaad waa in la geeyaa cinwaanka hoos ku xusan ama ka hor 20.12.2017: 11 at 00, oo la furi doono marka ay joogaan hindise-bixiyeyaasha doonaya inay ka qaybqaataan.
Dhammaan dalabka Tier II waa inay ku jiraan Dammaanadda Dammaanadda ah ee u dhiganta 12.000.000 TL ama u dhiganta lacagta lacagta lagu baddeli karo, hindisada waa in lagu furo cinwaanka hoos ku qoran iyadoo ay joogaan hindise-bixiyeyaasha rabitaanka inay kaqeybqaataan, waqtiga ugu dambeeya ee keenista dalabka Tier II iyo waa in la geeyaa ama ka hor.
Xeerarka iyo Qawaaniinta Soo iibsiga ee Bankiga ayaa khuseeyo oo lagu heli karo xiriirka soo socda:
Dalabyada soo socdaa ayaa laga yaabaa inay helaan macluumaad dheeraad ah xafiiskan soo socda waxayna dib u eegi karaan oo ay u heli karaan dukumiintiyada xafiiskan:
Magaca xiriirka: Sn. La xiriir Arzu si toos ah
Shaqo-bixiye: Degmada Caasimadda ee Izmir
Cinwaanka: Cumhuriyet Boulevard No: 1 6. Qolka fadhiga 617
Tel: + 90 232 293 1658
Fax: + 90 232 293 3625
Fahrettin Altay - Mashruuca Injineerinka Narl Nardere ee HRS wuxuu u baahanyahay EIA…
Dib u cusbooneysiiya inta u dhaxaysa Gobollada Degmadda iyo Waddada Rugta ee Sakarya
Mashruuca Metro ee Izmir